The Ab Presents Nepal » पूर्वगृहराज्यमन्त्री रहेका काँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिक भएको खुलाशा !
पूर्वगृहराज्यमन्त्री रहेका काँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिक भएको खुलाशा !
काठमाडौं –: पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिक पनि भएको खुलेको छ। भारतको उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा उनको स्थायी बसोवास रहेको प्रमाण देखिन्छ ।उनले भारतीय नागरिकका रुपमा सपथ खाएको र त्यहाँको एक कलेजको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइरहेको खुलेको छ ।
भारतको उत्तरप्रदेशको गोरखपुरनिवासी उनी त्यहाँको एक कलेजको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले भारतीय नागरिककै रूपमा शपथ पनि खाएका छन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।उत्तरप्रदेश, महाराजगन्जको ठुठीबारीस्थित राधादेवी इन्टरकलेज व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि कँडेल चुनाव लडेका थिए । सन् २०१६ मा भएको चुनावमा उनी असफल भए पनि गत वर्ष भएको चुनावमा भने उनी निर्वाचित भएका थिए ।
निर्वाचित भएलगत्तै हिन्दी भाषामा शपथ खाँदा कँडेलले आफू भारतको ३३ कसाया रोड, बेतिया हाता, जनपद गोरखपुरको बासिन्दा भएको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । आफूले दिएको विवरण गलत भए भारतको संविधानअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा पनि उनले शपथमा गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।